Saving up to 50% on limited stocks - Mr. Discount (Myanmar)
Home / Offers / Saving up to 50% on limited stocks
Saving up to 50% on limited stocks
Christmas Year End Sales
Christmas Year End Sales 2019 is here again!!!!
Enjoy your year end holidays with our special promotions and deals just for your office..
Saving up to 50% on limited stocks.
Valid till 31st of December 2019.
Showroom – Bld A2, Gr Fl, Shwekabar Housing, Mindama Road, Mayangone Township, Yangon.
Contact no – 09773846658
E’ko မှ ဤ Promotion သည် December 31, 2019 အထိသာဖြစ်ပြီး Promotion တွင် Usage နှင့် Terms & Conditions များရှိနိုင်သည်။
ဖော်ပြပါ Promotion အား ဤ website တွင် စတင်ထည့်သွင်းဖော်ပြသော နေ့မှာ December52019 ဖြစ်ပြီး E’ko မှ အချိန်မရွေးပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ဤ Promotion အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပေါ်လာပါက E’ko ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည်သာ အတည်ဖြစ်သည်။